ဂိမ်မာတွေရဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အရည်သွေးမြင့် Gaming Headphone7ခု
15 Feb 2018 . 7:38 AM
ဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂိမ်မာတွေဟာ စိတ်ကတောင့်တတဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေအလျောက် ဆော့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အမျိုးအစားကွဲပြားတဲ့ဂိမ်းတွေအလိုက် ဂိမ်မာတွေဆော့ကစားကြတဲ့ဂိမ်းတွေ ခြားနားသွားကြသလို ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်နဲ့ကိုက်ပြီး ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ညီမယ့်ဂိမ်းကောင်းမျိုးကို ရွေးချယ်ဆော့ကစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အက်ရှင်ဆန်ဆန်ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းဂိမ်းမျိုးလား ဒါမှမဟုတ် ဒရာမာအချိုးနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို အဆုံးထိတင်ပေးမယ့်ဂိမ်းမျိုးလား၊ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်နေရသလို နယ်မြေဒေသတစ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ့် ဂိမ်းမျိုးလားဆိုတာ ဂိမ်မာများကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ် တစ်ယောက်တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုကွဲပြားခြားနားတဲ့အယူအဆတွေကိုယ်စီရှိတဲ့ ဂိမ်မာတွေကြားမှာ တူညီနေတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်၊ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ဂိမ်မာတိုင်းဟာ အကောင်းဆုံးသောဂိမ်းတွင်းအတွေ့အကြုံတွေကို တွေ့ကြုံခံစားချင်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုပေးစွမ်းတဲ့ အရည်အသွေးအပြည့်ဝဆုံး ဂိမ်းတွင်းအတွေ့အကြုံတွေကို အဆုံးစွန်အထိခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဂိမ်းစက်တစ်လုံးရှိရုံ၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်းအသံပိုင်းမှာ အထိရောက်ဆုံးပံ့ပိုးမှုအပြင် ဂိမ်းကစားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးဆော့ကစားမှသာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုထိပ်ဆုံးအထိ ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် ဂိမ်းတစ်ခုကို Visual နဲ့ Audio ကဏ္ဍ၊ ရုပ်ပိုင်းနဲ့ အသံပိုင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲကြည့်လိုက်ပါ။ ရုပ်ပိုင်းမှာဘာတွေပါမလဲ? တီဗီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာမော်နီတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ပိုင်းကဏ္ဍမှာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဂိမ်းဂရပ်ဖစ်ရုပ်ထွက်၊ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားတဲ့မြင်ကွင်း၊ ရှင်းလင်းတိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုသဏ္ဌာန် အစရှိသဖြင့် ဂိမ်းဖန်သားပြင်ပေါ်က ကိုယ့်မျက်စိနဲ့မြင်ရသမျှ အရာတွေကို ရုပ်ပိုင်းကဏ္ဍလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေပါဝင်တဲ့မော်နီတာတွေ၊ FPS ဂိတ်ဆုံးနဲ့ 4K အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့မော်နီတာမျိုးတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွင်းအတွေ့အကြုံတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခံစားရမှာ ကြမ်းသေပါပဲ။ ရုပ်ပိုင်းကဏ္ဍဘက်က ဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုရင် အသံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ဂိမ်းတွင်းအသံတွေကို ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးတိုင်းမှာ ကြားနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရှိရမလဲ? ရုပ်ပိုင်းပဲအလေးထားပြီး အသံပိုင်းကိုဂရုမပြုမိကြတဲ့ဂိမ်မာများအတွက်ရော၊ အသံပိုင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလို့ယူဆထားသူများအပါအဝင် အဲဒီမေးခွန်းကို သိချင်နေသူများအဖို့ရော၊ ဂိမ်းတစ်ခုမှာ ရုပ်ပိုင်းနည်းတူအသံပိုင်းကလည်း အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရင်း ဂိမ်မာတွေရဲ့မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနဲ့ Gaming Headphone7ခုကို ဒီကနေဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဂိမ်မာအားလုံးမှာယူလို့ရနိုင်လောက်မယ့် ဈေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာနာမည်ကောင်းတွေရရှိထားတဲ့ Gaming Headphone တွေကိုပဲ ပုံလေးတွေနဲ့တကွ ကောက်နှုတ်ပေးထားပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးနေရာမှာတော့ ဈေးနှုန်းအလယ်အလတ်နဲ့ ကွာလတီအသင့်အတင့် headphone ကိုသုံးချင်သူ ဂိမ်မာများအတွက် Corsair HS50 နဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းပုံစံက ကိုယ့်ကိုဆွဲဆောင်ထားမှာမဟုတ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ Corsair HS50 ဟာ ဂိမ်မာတော်တော်များများရဲ့ အသံပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမလျော့တဲ့အသံထွက်စနစ်၊ အသံဖမ်းမိုက်ကရိုဖုန်း၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကြမ်းခံမယ့် headphone ပြုလုပ်ထားမှုတို့ကြောင့် သီးသန့်ကြီးအနေနဲ့ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မထည့်သွင်းထားပေမယ့် ဂိမ်မာတွေအသုံးပြုသင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းအသင့်ဆုံး headphone တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ Corsair HS50 ကိုဝယ်ယူလိုသူဂိမ်မာများအတွက်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိမှာပေါင် £54.99 ကျပ်နဲ့ မှာယူနိုင်ပါတယ်။
အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေဟာ သုံးရတာတန်လေ၊ ဈေးပိုများလေ လို့ဆိုရမလိုပါပဲ။ Asus ROG Strix Fusion 500 headphone မှာ ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့အသံထွက်စနစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး အပြိုင်အဆိုင်တွေများတဲ့ဂိမ်မာတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာ headphone ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်တဲ့အသံထွက်စနစ်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့အပြင်အဆင်၊ အနီ၊ အစိမ်း၊ အပြာအရောင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အရောင်ပြောင်းစနစ်၊ Surround Sound လို့လူတွေသိကြတဲ့ လက်တွေ့ဆန်ဆန်ပတ်ဝန်းကျင်အသံထွက်စနစ် အစရှိတဲ့အာမခံချက်တွေကိုပေးစွမ်းပြီး နာမည်တစ်ခုကိုဆွတ်ခူးထားတဲ့ headphone တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ သာမန်ဂိမ်မာတွေအတွက် အနည်းငယ်မြင့်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ဟာပရိုဂိမ်မာတစ်ယောက်၊ နာမည်ရ Esport အသင်းသားတစ်ယောက်၊ ဂိမ်းအဖွဲ့အစည်းထဲမှာလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ကိုက်ညီအောင် အသုံးပြုသင့်တဲ့ headphone ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ Asus ROG Strix Fusion 500 ကိုဝယ်ယူလိုသူဂိမ်မာများအတွက်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိမှာပေါင် £150 ကျပ်နဲ့ မှာယူနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်မာတွေရဲ့လက်စွဲ ဂိမ်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ SteelSeries ကိုလည်း လုံးဝမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ လက်ရှိမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုနေတဲ့ SteelSeries အမှတ်တံဆိပ် ဂိမ်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး အသုံးပြုသူဂိမ်မာတွေကို ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ ပေးစွမ်းနေပါတယ်။ SteelSeries Artic7ဟာ SteelSeries Artic စီးရီးရဲ့နောက်ဆုံးထွက်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Siberia 150 ကနေ အခု Artic7အထိ ကွဲပြားခြားနားတဲ့မော်ဒယ်တွေနဲ့ SteelSeries အမှတ်တံဆိပ် headphone တွေမှာ ဝတ်ဆင်ချိန်ကြာလည်း သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ Headphone အကျဉ်းအကျယ်ကိုလိုသလိုချိန်ညှိနိုင်မှု၊ အကောင်းဆုံးအသံထွက်စနစ်ကိုပေးစွမ်းထားမှု၊ ဈေးနှုန်းအစားစားနဲ့ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညှိ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူရွေးချယ်နိုင်မှု အစရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးပေးပြီး တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကွာလတီထုတ်ကုန်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ RGB illumination လို့ခေါ်တဲ့ headphone ကို အရောင်သုံးရောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့စနစ်၊ Virtual Surround Sound ဆိုတဲ့လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်အသံစနစ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ SteelSeries Artic7အပါအဝင် SteelSeries အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းအသုံးအဆောင်တွေကို ပြည်တွင်းမှာတင် လက်လီလက်ကားဝယ်ယူနိုင်ပြီး လက်ရှိအနေနဲ့ပေါင် £150 နဲ့ မှာယူနိုင်ပါတယ်။
အသံဆိုရင်ကွာလတီအကောင်းစားမှ လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Astro A40TR headset ကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းသွင်ပြင်ကတော့ လူတိုင်းအကြိုက်မဟုတ်ပေမယ့် အခိုင်အမာပြုလုပ်တပ်ဆင်ထားတာမို့ အကြမ်းခံပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အသံကို ပိုပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြားချင်တယ်ဆိုရင် earcup ဘေးကနားအုပ်အပိုင်းတွေကို လိုသလို အဖြုတ်အတပ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
7.1 surround sound ရဖို့အတွက်တော့ MixAmp Pro ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲကိုထည့်သွင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒါကိုသုံးသုံးမသုံးသုံး Astro ရဲ့အသံကွာလတီကတော့ စိတ်ချရသလို ပေးရတဲ့ဈေးကလည်း တန်ပါတယ်။ အသံအရည်အသွေးကိုထိန်းထားချင်တဲ့ gaming headset ကိုလိုချင်ရင်တော့ ဒါကိုရွေးချယ်သင့်တာအမှန်ပါ။ Astro A40 TR ရဲ့ကိုလက်ရှိဈေးနှုန်းကပေါင် £149.99 ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာမဆို အများနဲ့မတူဘဲ ထိုးထွက်နေတတ်တဲ့အရာ ရှိစမြဲပါ။ ဒီတစ်ခါ Headset အုပ်စုမှာ အဲဒီလိုသူမတူဘဲ တမူထူးနေတာကတော့ Logitech G433 ပါပဲ။ Headset တစ်ခုတပ်ဆင်ရာမှာ အမြဲသုံးနေကျပစ္စည်းတွေထက် G433 ကတော့ အများနဲ့မတူအောင် အရောင်တောက်တောက်ပိတ်သားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ မျက်စိပသာဒတော့ရှိပေမယ့် လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ပိတ်သားအောက်ကဖရိန်တွေက သိပ်အကောင်းကြီးလို့မခံစားရတာ သူ့အားနည်းချက်ပါပဲ။ အသံကွာလတီကတော့ ဘယ်ဂိမ်းအမျိုးအစားမဆိုမှာ အသံထွက်ကောင်းနေတာကြောင့် ရှိသင့်ရှိထိုက်တာထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဖြုတ်တပ်နိုင်တဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကလည်း အသံကိုရှင်းလင်းကြည်လင်ပြတ်သားစေပြီး မိုက်ကွဲသံ၊ မိုက်ပေါက်သံ၊ လေကွဲသံတွေကို စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ အသုံးတည့် filter ပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီလိုဈေးနှုန်းထဲမှာဆိုရင် အကောင်းဆုံးတွေထဲကတစ်ခုလို့ပြောရပါမယ်။ ဒီ Headset က မြင်တွေ့နေကျပုံစံမဟုတ်ပေမယ့်လို့ ကွဲပြားတဲ့အရသာကို ခံစားလိုသူတွေအတွက်တော့ စိတ်ကျေနပ်စေမှာ အသေအချာပါ။ Logitech G433 ကိုတော့လက်ရှိမှာပေါင် £109.99 နဲ့ မှာယူနိုင်ပါတယ်။
Sennheiser အမှတ်တံဆိပ် အသံပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို အားလုံးတစ်ကွေ့မဟုတ် တစ်ကွေ့တော့ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဂိမ်းလောကမှာတင်မက ဂီတလောကနယ်ပယ်၊ ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေရဲ့ အသံစနစ်တွေမှာပါ အသုံးပြုတတ်ကြတဲ့ Sennheiser အမှတ်တံဆိပ် အသံပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်တွေဟာ ပရိုအသံပညာရှင်များ အားထားရာအရည်အသွေးပြည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါပဲ။ Surround Sound စနစ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တိုင်း အကောင်းဆုံး headphone တစ်ခုဖြစ်မလာပါဘူး၊ အဲဒါကြောင့်ပဲ အခုဒီနေရာမှာ Sennheiser GSP 300 ကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီ headphone ဟာ ဂိမ်းကစားခြင်းတင်မှာသာမက ဂီတပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း သူမတူတဲ့အရည်အသွေးကိုပေးစွမ်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ gaming headphone များဟာ ဂိမ်းကစားမှုကိုပဲအသားပေးထားတဲ့ အသံစနစ်တွေကိုထည့်သွင်းထားကြလို့ သီချင်းတွေပြောင်းနားထောင်လိုက်ရင် ကိုယ့်အကြားအာရုံနဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Sennheiser GSP 300 ကတော့ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်သဘောကိုဆောင်တဲ့ headphone တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Sennheiser GSP 300 ကိုဝယ်ယူချင်သူများအတွက်တော့ လက်ရှိမှာ ပေါင် £89.99 နဲ့မှာယူနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့နောက်ကလိုက်ရမယ့် လိုအပ်တဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် ဂိမ်မာတွေအသုံးပြုမှုအများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်နေရာမှာ Razor တံဆိပ်က ထိပ်ဆုံးတက်ဆွတ်ခူးထားမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒီ Kraken Pro V2 ဟာ ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာစတိုင်ကျနေတယ်၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းသေသပ်တယ်၊ တန်ဖိုးမြင့်မားတယ်လို့ထင်မှတ်ရတယ်၊ အသံစနစ်ကလည်းပြောစရာလုံးဝမရှိအောင်ကောင်းတယ် အစရှိတဲ့ လူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် Razor အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဂိမ်းလောကတစ်ခုထဲမှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Surround Sound ကိုခံစားချင်ရင် Kraken V2 ကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်သေးတယ်။ ကမ္ဘာနံပါတ်တစ်ထိပ်တန်း YouTuber ဖြစ်တဲ့ Pewdiepie တောင် အခုလက်ရှိမှာအသုံးပြုနေရတဲ့ Headphone ဟာ Razor Kraken Pro V2 headphone ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင် အားလုံးအံ့သြရမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာကတော့ သီးသန့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Pewdiepie Headset Kraken Pro V2 မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ headphone ဟာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့မကိုက်အောင်ပဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့စနစ်တွေကကောင်းမွန်နေတယ်လို့ ဆိုရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ Razor Kraken Pro V2 ကိုဝယ်ယူလိုသူများကတော့ လက်ရှိမှာပေါင် £79.99 နဲ့ မှာယူနိုင်ပြီး Pewds မော်ဒယ်ကိုရယူလိုသူများကတော့ ဒေါ်လာ 99.99 ကျပ်နဲ့ မှာယူနိုင်ကြောင်းပြောရင်း ဂိမ်မာအားလုံးအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းမယ့် headphone အကြောင်းတွေကို ဒီကနေမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ အားလုံးကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ်ရွေးလို့ရပြီနော်။